Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Daawo Sawirada'' C/wali Gaas iyo xubno ka tirsan Beesha Caalamka oo kormeeray qalabka..
August 18 2017 15:36:37
Daawo Sawirada'' C/wali Gaas iyo xubno ka tirsan Beesha Caalamka oo kormeeray qalabka..
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Gaas oo ay wehlinayaan Masuuliyiin ka tirsan maamulka iyo Xubno Beesha caalamka taabacsan ayaa maanta kormeeray qalabka lagu dhisayo wadada Ceel-daahir iyo Ceerigaabo oo dhowaan ay soo iibsatey Puntland.
Qalabkaani ay masuuliyiinta kormeeren ayaa waxaa dhawaan laga soo dajiyay dekedda magalaada Bosaaso, iyada oo uu u jeedka ahaa in lagu dhiso xarumaha maamulka iyo wadooyinka dhismaha u baahan.
Xubnaha ka socday Beesha Caalamka ee Madaxweyne C/wali Gaas ku wehlinaayay Kormeerka ayaa waxaa kamid ahaa Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya, xoghayaha urur gobaleedka IGAD, wakiilka IGAD ee Soomaaliya, mas’uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya, QM, iyo mas’uuliyiin kale.
Masuuliyiinta ayaa warbixino kooban ka dhageystay Injineerada gacanta ku haya qorshaha dhismaha wadada.
Xoghayaha urur gobaleedka IGAD Maxmuum Macalin iyo wakiilkiisa u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey oo hadlay ayaa sheegay inay tahay wax lagu farxo horumarka Soomaaliya gaartay gaar ahaan Puntland.